Thola i-insulin ngaphandle kokubhaliswa > Insulin
I-insulin yabanesifo sikashukela
Abantu abatholakala benesifo sikashukela kufanele bahlole amazinga kashukela wegazi kuyo yonke impilo yabo, baphuze njalo izidakamizwa ezibulala amagciwane ezinqunywe ngodokotela babo, bese bejova i-insulin.
Ukuqapha ushintsho kupharamitha kashukela egazini, kubantu abanesifo sikashukela kunamadivayisi akhethekile iziguli angenza ngazo izivivinyo ekhaya, ngaphandle kokuya emtholampilo ngaso sonke isikhathi.
Okwamanje, intengo yama-glucometer nokuhlinzekela ukusebenza kwale divayisi kuphezulu kakhulu. Ngalesi sizathu, abanesifo sikashukela abaningi banombuzo: bangathola i-insulin neminye imishanguzo mahhala futhi ngubani okufanele ngixhumana nabo?
Zonke iziguli ezitholakala zinesifo sikashukela ziwela ngokuzenzakalelayo ngaphansi kwesigaba sokukhetha. Lokhu kusho ukuthi ngokwesisekelo senzuzo yombuso, banelungelo lokuthola i-insulin mahhala neminye imishanguzo yokwelapha lesi sifo.
Futhi, abanesifo sikashukela abakhubazekile bangathola ithikithi lamahhala kuyi-dispensary, enikezwa kanye njalo eminyakeni emithathu njengengxenye yephakethe ephelele yomphakathi.
Iziguli ezitholakala zinesifo sikashukela sohlobo 1 zinelungelo loku:
Thola i-insulin yamahhala ne-insulin,
Uma kunesidingo, yamukelwa esikhungweni sezokwelapha ngenhloso yokwelulekwa,
Thola ama-glucometer wamahhala wokuhlola ushukela wegazi ekhaya, kanye nezinto ezisetshenziswayo zisetshenziswa inani lemichilo emithathu yokuhlola ngosuku.
Uma kwenzeka isifo sikashukela mellitus sohlobo lokuqala, ukukhubazeka kuvame ukunqunyelwa, ngenxa yalesi sizathu kufakwa iphakheji eyengeziwe yezinzuzo kwabanesifo sikashukela abakhubazekile, okubandakanya nemithi edingekayo.
Kulokhu, uma udokotela ebeka umuthi obizayo ongafakwanga ohlwini lwezidakamizwa ezikhethiwe, isiguli singafuna ngaso sonke isikhathi futhi sithole umuthi ofanayo mahhala. Imininingwane engaphezulu yokuthi ubani onelungelo lokukhubazeka isifo sikashukela ingatholakala kwiwebhusayithi yethu.
Imithi ikhishwa ngokuqinile ngokuya ngokuya kadokotela, ngenkathi umthamo odingekayo kufanele ubhalwe kumbhalo wezokwelapha okhishwe. Ungathola i-insulin neminye imithi ekhemisi inyanga kusukela ngosuku oluchaziwe emgqonyeni kadokotela.
Ngaphandle kokunye, izidakamizwa zinganikezwa ngaphambili uma umuthi unenothi ngokuphuthumayo. Kulokhu, i-insulin yamahhala ifakwa ngokushesha lapho itholakala, noma ingakapheli izinsuku eziyishumi.
Izidakamizwa ze-Psychotropic zinikezwa mahhala amasonto amabili. Umuthi wezidakamizwa udinga ukuvuselelwa njalo ezinsukwini ezinhlanu.
Esikhathini sikashukela mellitus sohlobo lwesibili, isiguli sinelungelo:
Thola izidakamizwa ezidinga ushukela mahhala. Kwabanesifo sikashukela, kuvezwa umuthi okhombisa umthamo, onikezwe ngawo i-insulin noma izidakamizwa inyanga yonke.
Uma kunesidingo sokuphatha i-insulin, isiguli sinikezwa i-glucometer yamahhala enokudliwayo ngesilinganiso semichilo emithathu ngosuku.
Uma i-insulin ingadingeki kwabanesifo sikashukela, angathola futhi imichilo yamahhala, kepha udinga ukuthenga ngokwakho i-glucometer. Okuhlukile kuneziguli ezingaboni kahle, okunikezwe zona amadivaysi ngemigomo evumayo.
Izingane nabesifazane abakhulelwe bangathola ama-insulin nama-insulin mahhala. Banelungelo futhi lokukhipha imitha kashukela egazini nezinto ezidliwayo edivayisini yokulinganisa ushukela wegazi, kufaka namapeni wesirinji.
Ngaphezu kwalokho, kunikezwa ithikithi eliya eSanatorium lezingane, elingaphumula ngokuzimela futhi lihambisane nabazali bazo, okuhlala futhi kukhokhwe umbuso.
Ukuya endaweni yokuphumula nganoma iyiphi indlela yokuhamba, kufaka phakathi isitimela nebhasi, kumahhala, futhi amathikithi akhishwa ngokushesha. Kubandakanya nabazali abanakekela ingane egulayo engaphansi kweminyaka eyi-14 banelungelo lokuthola isibonelelo esilinganisweni somholo ophakathi nenyanga.
Ukusizakala ngalezi zinzuzo ezinjalo, udinga ukuthola idokhumenti kudokotela wakho wangakini okuqinisekisa ukuba khona kwalesi sifo kanye nelungelo lokusiza elivela kuhulumeni.
Ukwenqatshwa kwephakheji yomphakathi
Uma kungenakwenzeka ukuvakashela i-sanatorium noma i-disensary, umuntu onesifo sikashukela angenqaba ngokuzithandela iphasela elimisiwe lezokwelapha. Kulokhu, isiguli sizothola isinxephezelo sezezimali ngokungasebenzisi imvume.
Kodwa-ke, kubalulekile ukuqonda ukuthi inani elikhokhelwayo lizoba lincane ngokuqhathaniswa nezindleko zangempela zokuphila endaweni yeholide. Ngenxa yalesi sizathu, abantu bavame ukwenqaba iphakethe lomphakathi kuphela uma, ngasiphi isizathu, kungenzeki ukusebenzisa ithikithi.
Mayelana nokuthola izidakamizwa ezikhethekayo, umuntu onesifo sikashukela angathola i-insulin neminye imishanguzo ehlisa ushukela, yize enqaba ngokuzithandela. Kwenzeka okufanayo kuma-insulin syringes, glucometer, kanye nezinsizakalo zokuhlola ushukela wegazi.
Ngeshwa, namuhla isimo sinje ukuthi abanesifo sikashukela abaningi banqume ukuthatha ithuba lokwenqaba izinzuzo ukuze bathole izinkokhelo ezincishisiwe njengezinxephezelo ezivela kuhulumeni.
Iziguli zigqugquzela isenzo sazo kaningi ngempilo engeyinhle, zenqabe ukwelashwa endaweni yezempilo. Kodwa-ke, uma ubala izindleko zokuhlala amasonto amabili endaweni yokuphumula, kuvela ukuthi izinkokhelo zizoba ngaphansi kwezikhathi eziyi-15 kunephakethe eligcwele labanesifo sikashukela.
Izinga eliphansi lokuphila kweziguli eziningi lizenza zilahle ukwelashwa okuseqophelweni eliphezulu zivumele usizo oluncane lwezezimali.
Okwamanje, abantu abahlali bayibheka le ndaba yokuthi ngemuva kwesonto isimo sezempilo siwohloka kakhulu, futhi ngeke kube khona ukwelashwa.
Ukuthola izidakamizwa ezithandwayo
Izidakamizwa zamahhala zokwelashwa kwalesi sifo ngesisekelo sezinzuzo zichazwa yi-endocrinologist ngokususelwa ekuhlolweni kwesifo sikashukela. Ukuze lokhu kwenzeke, isiguli sihlolwa ngokuphelele, singenisa izivivinyo zegazi nomchamo ngamazinga kashukela. Ngemuva kokuthola yonke imiphumela, udokotela ukhetha isheduli yokuphatha kanye nomthamo womuthi. Lonke lolu lwazi lukhonjisiwe kunqunyelwe.
Izidakamizwa zinikezwa mahhala kuwo wonke amakhemisi kahulumeni ngesisekelo sombhalo obekiwe, okhombisa inani elifunekayo lomuthi. Njengomthetho, imithi ingatholakala njalo ngenyanga.
Ukungezelela inzuzo bese uthola izidakamizwa zamahhala futhi, futhi udinga ukuxhumana ne-endocrinologist futhi uhlolwe. Lapho ukuxilongwa kuqinisekisiwe, udokotela uzonikeza umuthi wesibili.
Uma udokotela enqaba ukunquma izidakamizwa ezikhethekile ezifakiwe ohlwini lwezidakamizwa zamahhala zabanesifo sikashukela, isiguli sinelungelo lokuxhumana nenhloko noma udokotela oyisikhulu wesikhungo sezokwelapha. Kubandakanya nosizo ukuxazulula inkinga emnyangweni wesifunda noma eMnyangweni Wezempilo.
Iphampu ye-insulin iyithuluzi elihlakaniphile elenzelwe ukuletha imithamo emincane ye-insulin ngokuqhubekayo ngaphansi kwesikhumba. Ngokushaya okuqondile, kusetshenziswa amashubhu acasicone amancanyana anobude obuhlukahlukene nama-cannulas akhethekile enziwe ngeplastiki noma insimbi. Ubude be-cannula bukhethwe ngawodwana, kanye nosayizi wezinaliti ezijwayelekile zokulahlwa zamapeni wesirinji. I-Silicone tube ingaba mfushane futhi ibe yinde ngokuya ngezifiso zomuntu siqu nokuhamba.
Umehluko omkhulu kanye nenzuzo yepompo ye-insulin ukwethulwa kwemithamo emincane kakhulu. Amamodeli wakamuva akuvumela ukuthi usethe isinyathelo kuya emayunithi angu-0,01 i-insulin, ebaluleke kakhulu ekunxeshezelweni ngempumelelo kwezingane ezisencane nabesifazane abakhulelwe abanesidingo esincanyana samahomoni okufakelwa. Idivayisi ngokwayo ithatha indawo yemijovo yansuku zonke, eyandisa kakhulu induduzo engokwengqondo kanye nekhwalithi yempilo yeziguli
Ngakho-ke, ipampu ye-insulin iqukethe
Idivayisi ngokwayo incane (cishe njengepani) ngamabhethri
Iphindisela indawo yokugcina endaweni yokugcwalisa nge-insulin entsha (etholakala ngaphakathi kudivayisi uqobo)
Isethi yokufakwa (i-cannula kanye ne-silicone tube)
Izinto ezi-2 zokugcina zivame ukubizwa ngokuthi zisebenzise okuphekayo yephampu futhi zingaphansi kokubuyiselwa okuphoqelekile okuvunyelwe, njengoba kuvunyelwene ngumenzi futhi kubuye kuqinisekiswe ngokwamandla. Kwesinye isikhathi kufanele ungene esikhundleni ngaphambili.
Ngemuva kokulungiselela iphampu ye-insulin ukuze isetshenziswe, umsebenzisi usetha amapharamitha adingekayo. I-insulin isetshenziswa nje iDemo ne-ultrashort, kepha iza ngezindlela ezimbili: i-bolus ne-basal. Sizokhuluma kabanzi ngezici zokwelashwa kwephampu kulezi zihloko ezilandelayo. Kepha umgomo oyisisekelo yilokhu: irejimeni yebolus ukulethwa kwehomoni yokusebenzisa ama-carbohydrate atholakele kanye / noma ukwehla koshukela wegazi, kanti irejimeni eyisisekelo ilingisa ukugcinwa kwemvelo kwe-insulin phakathi nosuku ukuze i-glycemia ibe phakathi kokudla naphakathi kokulala.
Zonke izindlela zingahle zibekwe ngezikhathi ezithile, ezinikeza inzuzo ebonakalayo kumpompo ngokuqhathaniswa nemijovo ejwayelekile. Lapha kungenzeka ukulungisa ukulethwa kwevolumu efiselekayo ye-insulin ngokuya ngesikhathi sosuku nomsebenzi olindelekile, i.e. dala imenyu yakho ngezinsuku ezahlukahlukene zeviki.
Ayini amaphampu e-insulin?
Okokuqala, abakhiqizi abaningana abaziwayo bemishini yezokwelapha bakhiqiza imishini enjalo yezokwelapha, futhi kukhona amamodeli ahluke ngokuphelele wokuqoqwa kwemisebenzi nezindleko. Iningi lamahhovisi abamele eRussia anikela ngemikhiqizo yabo ukuze ihlolwe isikhashana, i.e. "ungaqasha" futhi uthathe isinqumo sokuthi ngabe le modeli ilungele wena uqobo, futhi emva kwalokho uthenge igajethi yakho.
Kunezimo ezinempendulo (idivaysi encane yokulinganisa ushukela egazini ihlinzekwa ngekhithi) noma kuphela ngemodi yokulawulwa kwehomoni. Isigaba samanani wamagajethi nawo sehluke kakhulu, kepha, ngokuyisisekelo, insiza ayibizi kakhulu kubantu besilinganiso baseRussia. Abakhiqizi abaphambili abasetshenziswa eRussia yi-Akku Chek, Medtronic, Omnipod, Dana. Izindleko zokusetshenziswa ziyahlukahluka ngokuya ngomkhiqizi okhethiwe. Kepha cishe ezingeni eliseduze.
Kukhona amathuba okuthola le divayisi mahhala, kepha imithetho iyabuyekezwa minyaka yonke futhi udinga ukuthola ulwazi olusha olusuka eMnyangweni Wezempilo nakudokotela wakho.
Kudingeka nini iphampu ye-insulin?
Kunemibono eminingi ngisho nezinganekwane eziphathelene nokusetshenziswa kwama-dispensers ezinganeni nakubantu abadala. Kunezinkomba ezithile kanye ne-contraindication yokusebenzisa ukwelashwa kwephampu. Ngalesi sizathu, isifiso sokushintshela kule ndlela yokulethwa kwe-insulin kungenzeka ngemuva kokubonisana okuphoqelekile nodokotela. Ungadinga ukulaliswa esibhedlela izinsuku eziningana esibhedlela lapho ukhetha imithamo noma ukubhekwa kukadokotela okusobala ku-inthanethi. Ukubalwa kokuqala kufanele futhi kuphathiswe kudokotela ochwepheshe, okokuqala, ukuze ungadumali ngaphambi kwesikhathi futhi ubekezelele ubunzima bezinsuku zokuqala. Futhi zenzeka ngisho nakubantu abanesifo sikashukela abanolwazi.
Ngakho-ke, lapho kunconywa iphampu
Ukwelashwa kwe-pump kusebenza ngempumelelo ezinganeni ezincane ngenxa yesinyathelo esincane kakhulu sokuphathwa kwe-insulin.
Abesifazane abakhulelwe ngesikhathi sokubeletha nesikhathi sokubeletha.
Abesifazane abanesifo sikashukela bahlela ukukhulelwa.
Izingane ezifunda enkulisa kanye nesikole zizodwa ngaphandle kokugadwa ngabazali.
Abantu abadala abathanda uhlobo oluhlukile lwansuku zonke futhi bafuna ukuzama ukwelashwa kwephampu.
Isifo sikashukela esine-hemoglobin ephezulu ye-glycated.
Iziguli zixabana ne-insulin ende.
Iziguli ezinokuguquguquka okukhulu kushukela wegazi
Lapho kukhona umlando we-hypoglycemia onzima nokuhlaselwa ebusuku.
Phambi "kokusa kokusa."
Inkambo eyisifo sikashukela.
1 I-insulin enjineli yezofuzo - iyini?
2 Izifo ezihambisana ne-insulin
Isikhathi sesikhathi sezidakamizwa
4 Ukusetshenziswa kwe-insulin yomuntu
4.1 Imicimbi engemihle
4.2 Izimpawu zokusebenzisa ngokweqile
I-insulin eyakhiwe ngofuzo lomuntu i-hormone yesisombululo somjovo wesifo sikashukela i-mellitus. Sebenzisa umuthi ngokucophelela, kumthamo onqunyelwe ngokuqinile, ngaphandle kwalokho ukwamukela kugcwele ukusabela okungekuhle noma i-overdose. Ngaphezu kwalokho, udokotela unesibopho sokunquma umuthi futhi uwuphathe, ngoba kunezinhlobo eziningi ze-insulin, ngayinye enikezwe okuthile okucacile.
I-insulin ye-genetic engineering - iyini?
I-insulin ibandakanyeka ezinqubweni eziningi ze-metabolic zomzimba womuntu, ngakho-ke umphumela omkhulu ubonakala ekunciphiseni izakhiwo - kwehlisa ukugcwala kweglucose egazini. Kodwa-ke, ngenxa yezizathu eziningi, i-pancreas ivame ukuyeka ukukhiqizwa kwe-hormone, bese kuthathelwa indawo i-insulin eyakhiwe ngofuzo.
I-insulin eyenziwe ngenjini ikwazi ukufaka i-insulin yabantu, futhi itholakala ngamakhemikhali ngokuhlanganisa i-Escherichia coli noma ithathe indawo ye-amino acid ye-porcine hormone.
Phambilini, i-hormone yenziwa kusuka ezilwaneni ezi-pancreatic, kepha ngokushesha le ndlela yathathelwa indawo ngamakhemikhali. Imithi esekwe ezilwaneni yahlala, kepha ibhekwa njengengasebenzi kahle. Ngokuhlanganiswa kwamakhemikhali, kubuye kusetshenziswe uhlobo lwe-non-pathogenic E. coli noma imvubelo. Ngakho-ke yenza amalungiselelo e-insulin ahlukahlukene. Izici ezinhle zezimali yilezi ezilandelayo:
ukulandelana kwe-amino acid
isikhathi sesenzo - i-ultrashort, isikhathi esifushane, ubude besikhathi eside kanye nesenzo eside.
Impilo yomuntu incike ekukhiqizweni kwe-insulin emzimbeni, ngakho-ke ukuthola i-hormone kuyisidingo kubantu abaye batholwa nalokhu okulandelayo:
Isifo sikashukela esinesifo sikashukela, sisho ukuphathwa okuphoqelekile kwe-insulin.
Thayipha 1 bese uthayipha isifo sikashukela esingu-2. Ngokwesifo sikashukela sohlobo 1, ipancreas ayikwazi ukukhiqiza ama-hormone uwonke; ngesifo sikashukela sohlobo 2 siyakwenza, kodwa ngamanani anganele.
I-ketoacidosis yesifo sikashukela ukuntuleka kwe-hormone okunzima ngokwakhiwa kwenani elikhulu lama-ketones egazini. Isimo sisejwayelekile kwabanesifo sikashukela abangakwazi ukulawula lesi sifo: bayaphuthelwa imijovo, abaweli umkhambi noma belashwa ngemithi yabantu.
I-Hypo- ne-hyperglycemia kubantu abangenaso isifo sikashukela. I-Hypoglycemia ingushukela wegazi ophansi, futhi i-hyperglycemia iphakeme. Okokugcina kuvame ukuvela ngokungemuva komthamo ophansi we-insulin, ukwehluleka ukulandela indlela yokudla yesifo sikashukela noma ukutheleleka.
I-Dystrophy kanye ne-pathologies ehlukahlukene.
Isikhathi sezenzo zezidakamizwa
Isixazululo se-insulin sihlukile ngesikhathi sesenzo. Umehluko phakathi kwamathuluzi afakwe kuhlu etafuleni:
Izidakamizwa ngesikhathi sesenzo
Isikhathi sokwenza (ihora)
I-Ultrashort 4 Umphumela wenzeka kungakapheli ihora nesigamu I-Apidra, Insulin Novorapid, Humalog
Kuvunyelwe ukungena ngaphakathi ngaphambi kokudla nangemva kwayo
Asikho isidingo sokulunywa ukuze unikeze umphumela wokupholisa
Kafushane 5 Umphumela kwenzeka ngaphakathi kwengxenye yehora I-Actrapid, Insulin Rapid, Humodar
Umuthi uphathwa imizuzu engu-15 ngaphambi kokudla
Dinga umthamo amahora ambalwa ngemuva komjovo
Okuphakathi 12—16 Umphumela wokwelapha uyabonakala ngemuva kwamahora angama-4-8 I-Protafan, i-Novomiks, i-Humulin NPH
Kuyadingeka ukungena ekuseni nakusihlwa
Kusetshenziselwa uhlobo 1 sikashukela
Ukwenza into ende 24 Umphumela wokwelapha ngemuva kwamahora we-4-6 "I-Monodar Long", "Levemir", "Ultralente"
Ukulingiswa kwehomoni yemvelo
Isetshenziselwa uhlobo 2 sikashukela
Ukusetshenziswa kwe-insulin yomuntu
Inhlala-kahle nempilo yomuntu onesifo sikashukela kuya ngemithetho yokusebenzisa umuthi. Imithamo nokwelashwa kufanele kubhekiswe ngqo kudokotela. Ukusetshenziswa kwesidakamizwa ngendlela efanele kususelwa kule mithetho elandelayo:
Umthamo ukhethiwe ngamunye esigulini ngasinye.
Umthamo unqunywa ngamunye esigulini ngasinye.
Imijovo yenziwa imizuzu engu-15-30 ngaphambi kokudla.
Kwenqatshelwe ukusebenzisa isixazululo uma kudlengiswa, izidumbu zakwamanye amazwe noma i-turbidity kutholakala kuyo. Uketshezi olufanele luyacaca.
Izinga lokushisa lesisombululo kufanele lihambisane lokushisa kwekamelo.
Indawo yomjovo kufanele iguqulwe ngesilinganiso senyanga. Njengoba lezo zindawo zisebenzisa amahlombe, okhalweni, isisu noma amabhuzu.
Imijovo engaphansi kufanele yenziwe ngokuqapha ukuze ungangeni emkhunjini.
Ukusabela okwenziwa njalo kwe-insulin ngendlela yokuvuvukala, ukulahleka kwesifiso sokudla noma ukozela. Isimo singesesikhashana. Phakathi kwezimpawu eziphambili zokusabela komzimba, ngaphezu kwalokhu okukhulunyiwe, kukhona:
ubuthi, ukuswela amandla,
umfutho wegazi ophansi.
Ezindaweni lapho kufakwa khona i-insulin, i-lipodystrophy kwesinye isikhathi ibonwa - ukungabi bikho kwezicubu ze-adipose. Ngakho-ke, kungcono ukuthi ushintshe indawo yomjovo njalo ngenyanga.
Ukuqunjelwa kungavela ngenxa yokusetshenziswa ngokweqile kwe-insulin.
I-drug overdose ibonakala ngezimpawu ze-hypoglycemia. Esigabeni sokuqala ukwakheka kwalesi simo, kungenzeka ukuthi uzisuse ngokuzimele izimpawu - ukudla umkhiqizo onokuqukethwe okunoshukela omningi noma "ukukhanya" ama-carbohydrate. Noma yazisa izixazululo ezikhethekile ze-glucagon ne-dextrose. Izimpawu zokweqisa ngokweqile yilezi:
Ukufakwa esikhundleni kwama-hormone okwenziwa emzimbeni kusiza ekwelapheni abantu abanesifo sikashukela, ngoba umuthi unciphisa ukugcwala kweglucose egazini ngenxa yokufakwa kahle emzimbeni. I-insulin isetshenziswa kuphela ngemuva kombono wezokwelapha, ngaphansi kokuqondisa udokotela, ukuze kungaholeli emiphumeleni emibi. Lokhu kuyasebenza nasekudlulisweni kwesiguli kolunye uhlobo lwe-insulin.
Ukufakelwa insulin okufushane kwabaneshukela
Imboni yezemithi ikhiqiza izidakamizwa ezinhlobonhlobo zama-hormonal ukulawula ushukela wegazi. Enye yazo insulin. Iyakwazi ukwenze i-glucose ejwayelekile ezigulini ezinesifo sikashukela ngesikhathi esifushane, okuyenza ibe ithuluzi elibalulekile.
Umqondo we-insulin esebenza ngokufushane
Ngabe lolu hlobo lwe-insulin lubekwa nini?
Ngabe i-insulin ifushane isebenza isikhathi esingakanani futhi iqala nini?
Izinhlobo zamalungiselelo we-insulin amnene
I-Ultra iDemo Insulin
Ungabala kanjani i-insulin emfushane - amafomula wesifo sikashukela
Umthamo omkhulu wokuphatha olulodwa
Ungayifaka kanjani i-insulin emfushane? (ividiyo)
Ngokushesha lapho kwethulwa i-insulin, iyancibilika futhi ngokushesha yenza izinqubo ze-metabolic ezihambisana nokumuncwa kweglucose.
Ngokungafani nezidakamizwa ezisebenza isikhathi eside, ziqukethe kuphela isixazululo esimsulwa sama-hormonal ngaphandle kwezithasiselo. Ukusuka kwigama kusobala ukuthi ngemuva kwesingeniso, baqala ukusebenza ngokushesha okukhulu, okungukuthi, ngesikhathi esifushane behlisa izinga likashukela wegazi. Kepha ngasikhathi sinye, bayamisa isenzo sabo ngokushesha kunezidakamizwa zesikhathi esiphakathi sokwenza, njengoba kubonakala esibonelweni sesikimu esilandelayo:
Ama-insulin amafushane asetshenziswa eyedwa noma ahlanganiswe nama-hormone asebenza isikhathi eside. Kuvunyelwe ukungena ezikhathini ezi-6 ngosuku. Imvamisa, kubekwa ezimeni ezinjengokuthi:
isidingo somzimba esingazinzile se-insulin,
izinkinga zesifo sikashukela - ketoacidosis.
Ngokuphathwa kwe-subcutaneous, umphumela omude kakhulu womuthi uyabonakala, owenzeka kungakapheli imizuzu engama-30 kuya kwengama-40, lapho nje ukugaya ukudla okudliwayo kwenzeka.
Ngemuva kokuthatha umuthi, inani eliphakeme lesenzo se-insulin litholakala ngemuva kwamahora ama-2-3. Isikhathi kuncike kumthamo olungiselelwe:
uma i-4 UNITS - ama-6 UNITS, isikhathi sokukalwa kwesijwayelekile cishe singamahora ayi-5,
uma amayunithi ayi-16 noma ngaphezulu, angafinyelela amahora angama-6-8.
Ngemuva kokuphela kwesenzo, lesi sidakamizwa sikhishwa emzimbeni ngamakhonya e-contra-mahormone.
Kunamalungiselelo amaningi e-insulin alandelayo, lapho izidakamizwa ezisetafuleni zithandwa kakhulu:
Amagama Ezidakamizwa Ukuqala kwesenzo Inani lomsebenzi Isikhathi sokusebenza
I-Actrapid, Gansulin R, iMonodar, Humulin, Insuman Rapid GT Ngemuva kwemizuzu engama-30 kusukela esikhathini sokuphatha 4 kuya 2 amahora emva nokuphathwa Amahora angama-6-8 ngemuva kokuphathwa
Lokhu kufakwa ku-insulin kubhekwa njengobunjiniyela bofuzo bomuntu, ngaphandle kweMonodar, okubhekiselwa kuyo njengengulube. Kutholakala ngesimo se-soluble solution in vials. Zonke zenzelwe ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2. Ngokuvamile kunqunywa ngaphambi kwezidakamizwa ezisebenza isikhathi eside.
Izidakamizwa aziphikiswa kwabesifazane abakhulelwe nababolekayo, ngoba lolu hlobo lwe-insulin alungeni i-placenta lungene ebisini lesifuba.
Lokhu kungukusungulwa kwakamuva kwe-pharmacology. Ihluka kwezinye izinhlobo ezenzweni zayo ezicishe zisheshe, Izidakamizwa ezibekiwe kakhulu yilezi:
I-Apidra, i-NovoRapid, i-Humalog Imizuzu engu-5-15 ngemuva kokufaka 2 kuya emahoreni angu-1 ukusuka esikhathini sokuphatha 4-5 amahora emva ukuphathwa
Le mishanguzo iyizifaniso zehomoni yomuntu. Zilungele ezimweni lapho udinga ukuthatha khona ukudla, kepha ubuningi bazo abaziwa, lapho kunzima ukubala umthamo we-insulin wokugaya. Ungaqala udle, bese ubale umthamo bese uxaka isiguli. Njengoba isenzo se-insulin sishesha, ukudla ngeke kube nesikhathi sokuthamba.
Le insulin ye-ultrashort yakhelwe ukuthi isetshenziswe lapho abantu abanesifo sikashukela bephuza ukudla kwabo futhi bedla amaswidi amaningi kunalokho okunconywayo. Imvamisa ezimweni ezinje kuba nokwanda okukhulu koshukela, okungaholela ezinkingeni zempilo. Lapho-ke le mithi ingasiza. Kwesinye isikhathi, lapho isiguli singakwazi ukulinda imizuzu engama-40, bese seqa ekudleni kakhulu ngaphambili, lolu hlobo lwe-insulin lungalungenwa futhi.
I-insulin enjalo ayinqunyelwe iziguli ezilandela yonke imithetho ekudleni. Imvamisa, kuphela njenge-ambulensi yokugxuma okubukhali kushukela.
Akukona ukuphikisana nabesifazane abakhulelwe abane-diagnostic yesifo sikashukela. Kuvunyelwe ukufaka isicelo, noma ngabe kukhona i-toxicosis yokukhulelwa.
Inzuzo ye-insulin ye-ultrashort ukuthi ingakwazi:
yehlisa imvamisa yoshukela wegazi okhuphukayo ebusuku, ikakhulukazi ekuqaleni kokukhulelwa,
asize ukulungisa ushukela kumama okhulelwe ngesikhathi sesigaba se-cesarean,
yehlisa ubungozi bezinkinga ngemuva kokudla.
Le mishanguzo isebenza kakhulu kangangokuba ingakwazi ukuguqula ushukela ngesikhathi esifushane, kuyilapho umthamo uphathwa kancane, osiza ukuvimbela izinkinga ezihlukahlukene.
Izinga le-Glycemia (mg /%) Ifomula leForamu Isibonelo Sokubalwa
150 kuya ku-216 (mg /% - 150) / 5 Uma izinga likashukela wegazi lingama-170 mg /%, ukubalwa kunjengokulandelayo: (170-150) / 5 = 4 IZITHOMBE
Kusuka ku-216 (mg /% - 200) / 10 Uma izinga likashukela wegazi lingama-275 mg /%, isibalo sinje: (275-200) / 10 = 7.5 IZITHOMBE. Ungahlanganisa - amayunithi ayi-7 noma ayi-8.
Ukubalwa kwedosi kususelwa kokudla okudliwayo
Umthamo owodwa wokulawulwa kwe-insulin osezingeni elilinganiselwe awuxhomeki kuphela ezingeni likashukela osegazini, kodwa futhi nokudla okudliwayo. Ngakho-ke, ekubalweni kufanelekile ukubhekisisa la maqiniso alandelayo:
Iyunithi yesilinganiso sama-carbohydrate amayunithi wesinkwa (XE). Ngakho-ke, 1 XE = 10 g we-glucose,
Kwi-XE ngayinye udinga ukufaka iyunithi eyi-1 ye-insulin. Ukubalwa okunembe kakhudlwana, le ncazelo iyasetshenziswa - iyunithi eli-1 le-insulin yehlisa i-hormone ngo-2.0 mmol / l, ne-1 XE yokudla kwe-carbohydrate ikhuphukela ku-2.0 mmol / l, ngakho-ke kuwo wonke ama-0.28 mmol / l adlula ama-8, I-25 mmol / l, iyunithi eli-1 lezidakamizwa liyabhalwa,
Uma ukudla kungenayo ama-carbohydrate, izinga le-hormone esegazini alikhuphuki.
Ukwenza ukubala kube lula, kunconywa ukugcina idayari enjengale:
Isibonelo sokubalwa: Uma izinga likashukela liyi-8 mmol / l ngaphambi kokudla, futhi kuhlelwe ukuthi kudliwe ama-20 g wokudla okwe-carbohydrate noma 2 XE (+4.4 mmol / l), lapho-ke ngemuva kokudla ushukela kuzokhuphukela ku-12,4, kuyilapho okujwayelekile ngu-6. Ngakho-ke, kuyadingeka ukwethula amayunithi ama-3 womuthi ukuze inkomba kashukela wehle ufike ku-6.4.
Noma yimuphi umthamo we-insulin ulungiswa ngudokotela ohambelayo, kodwa akufanele ube ngaphezulu kune-1.0 PIECES, ebalwa nge-1 kg yesisindo sayo. Lona umthamo omkhulu.
I-overdose ingaholela ezinkingeni.
Ngokuvamile, udokotela unamathela kule mithetho elandelayo:
Uma isifo sikashukela sohlobo loku-1 sisanda kutholwa, kusanda kuthathwa umthamo ongadluli kumayunithi ayi-0,5.
Ngokunxeshezelwa okuhle phakathi nonyaka, umthamo ungama-0.6 U / kg.
Uma ukungazinzi kubonwa ngohlobo 1 sikashukela, ushukela uguquka njalo, bese kuthathwa u-0.7 U / kg.
Ngokuxilongwa kwesifo sikashukela esibolile, umthamo ngu-0.8 IU / kg.
Nge-ketacidosis, kuthathwa u-0.9 U / kg.
Uma ukukhulelwa ku-trimester yokugcina kungama-unit ayi-1.0 / kg.
Zonke izinhlobo ze-insulin zivame ukuphathwa cishe ngokufanayo ngaphambi kokudla. Kunconywa ukuthi ukhethe lezo zindawo emzimbeni womuntu lapho kungadluleli khona imithambo yegazi emikhulu, kukhona imali yamafutha angaphansi.
Ngokuphathwa kwe-venous, isenzo se-insulin sizoba ngokushesha, okungemukeleki ekwelashweni kwansuku zonke. Ngakho-ke, kuphakanyiswa ukwenganyelwa kwesidakamizwa, okufaka isandla ekufakweni kwe-insulin egazini.
Ungasikhetha isisu, kepha ungagwinyi ngaphakathi kwesilinganiso esingama-6 cm kusuka inkaba. Ngaphambi komjovo, udinga ukugeza le ndawo futhi ugeze izandla zakho ngensipho bese womile. Lungiselela konke okudingekayo kwinqubo: isirinji elahlwayo, ibhodlela elinezidakamizwa kanye nephedi yokotini. Qiniseka ukuthi ubheka usuku lokuphelelwa yisidakamizwa!
Okulandelayo, kufanele ulandele imiyalo elandelayo:
Susa i-cap kusuka kwisirinji, ushiye isicubu senjoloba.
Phatha inaliti ngotshwala bese ungena ngokucophelela ebhodleleni nomuthi.
Hlanganisa inani elifanelekile le-insulin.
Thatha inaliti bese ukhipha umoya, uhole okokufaka isirinji kuze kwehle umthamo we-insulin.
Ngesithupha nembotshana, yenza isibaya esincane sesikhumba. Uma ungqimba lwama-subcutaneous fat ungqimba, khona-ke siletha inaliti nge-angle engu-90 degrees, ngethambo elincanyana - inaliti kufanele ibekwe kancane engxenyeni engama-45 degrees. Ngaphandle kwalokho, umjovo ngeke ube onqenqemeni, kepha ungokomzimba. Uma isiguli singenaso isisindo ngokweqile, kungcono ukusebenzisa inaliti elincanyana nelincane.
Kancane kancane futhi ngokushelela hlala i-insulin. Ijubane kufanele lifane umfaniswano ngesikhathi sokuphatha.
Lapho isirinji singenalutho, susa inaliti ngokushesha ngaphansi kwesikhumba bese ukhulula isibaya.
Beka isicoco esivikela inaliti yesirinji bese uyilahla.
Awungeke njalo ukhanye endaweni efanayo, futhi ibanga ukusuka komunye umjovo kuya kwelinye kufanele libe ngamasentimitha ayi-2. Omunye umjovo: kuqala ethangeni linye, bese kwelinye, bese kubhoka. Ngaphandle kwalokho, ukuhlangana kwamafutha kungenzeka.
Izinga lokumunca ama-hormone lize lincike ekukhetheni kwendawo. Ngokushesha kunakho konke, i-insulin ifakwa odongeni olungaphambili lwesisu, bese emahlombe nasezinkalweni, futhi kamuva ukusuka ngaphambili kwamathanga.
Kungcono ukujova esiswini, ukuze isenzo senzeke ngokushesha lapho sebedla.
Ukuze ufunde kabanzi ngenqubo yokusebenzisa i-insulin, bheka le ndatshana noma ividiyo elandelayo:
Ekuphetheni, kubalulekile ukuqaphela ukuthi awukwazi ukukhetha ngokuzimela umuthi obamba amafushane, ushintshe umthamo wawo ngaphandle kokuyalelwa ngudokotela. Kuyadingeka ukuthuthukisa, kanye ne-endocrinologist, uhlelo lokuphathwa kwalo ngokuya ngohlobo nenqubo yokudla ethathiwe. Kungcono ukuthi uguqule njalo indawo yokujova, ugcine kahle umuthi, uqaphele izinsuku zokuphelelwa yisikhathi. Futhi ushintsho oluncane nolunzima, thintana nodokotela.